WIKO VIEW 5 Plus: hevitra, famaritana ary vidiny | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | 29/04/2021 20:00 | hevitra
Amin'ity indray mitoraka ity dia entinay aminao ny famakafakana fitaovana iray mahazatra anay. Nahazo ny Wiko View 5 Plus, ilay zokilahy lahy ao amin'ny Wiko View 5 izay afaka namakafaka herinandro vitsivitsy lasa izay. Tsy azo ihodivirana eo amin'izy roa ireo ny fitoviana sy ny fampitahana, fa hiezaka izahay hifantoka ary hilaza aminao ny momba azy tsirairay.
Indray mandeha indray, tsy maintsy milaza isika fa mifantoka be amin'ny fanomezana i Wiko vokatra manana kalitao mandrakariva tsy misy ny vato misakana. Afaka nanandrana fitaovana tahaka ny Wiko Y61, na ny vao tsy ela akory izay Hizaha 5, fa ankehitriny kosa dia manana isika fitaovana mampiakatra ny laharana voalohany. Fanatsarana ny tombontsoa ankapobeny amin'ny fiakaran'ny vidin-javatra tsy dia misy dikany.
1 Wiko View 5 Plus, betsaka kokoa ho an'ny kely dia kely
3 Tsy maninona ny famolavolana
4 Ny efijery an'ny Wiko View 5 Plus
5 Fitaovana anatiny an'ny Wiko View 5 Plus
6 Fizarana sary ao amin'ny Wiko View 5 Plus
7 Sary nalaina niaraka tamin'ny Wiko View 5 Plus
8 AUTONOMY (amin'ny sora-baventy)
9 Antsipirihany, fanampiny sy ny tsy fisian
10 Latabatra famaritana Wiko View 5 Plus
11 Tombontsoa sy lafy ratsy
11.5 Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Wiko View 5 Plus, betsaka kokoa ho an'ny kely dia kely
Rehefa mitady finday avo lenta vaovao isika dia misy toerana raikitra izay ao an-tsaina foana. Mazava ho azy fa afaka miova be ireo miankina amin'ny teti-bola ananantsika amin'izany. Fa amin'ny ankapobeny, Izahay dia mila finday afaka manana ny tombony rehetra amin'izao fotoana izao tsy misy idiran'ny fampiasam-bola tena lehibe.
Zava-dehibe foana ny vidiny raha izany dia. Tamin'ny fotoana sy ny fiainana dia afaka nahita ny fomba tsy izany foana kalitaon'ny vokatra tsara kokoa ary tombony tsara kokoa dia mifanaraka amin'ny vidiny. Miaraka amin'i Wiko dia nahita finday avo lenta tena manan-kery izahay. Fa amin'ny ny View 5 Plus, miakatra ny haavon'ny fangatahana mandra-pametrahana azy ao a solvent midrange afaka mifaninana amin'ireo fitaovana hafa fantatra kokoa.
Amin'ny ankapobeny, ny Wiko View 5 Plus dia mahavita mandrefy ny fahavalony. Sarimihetsika tsara, batterie tsara, mpanodina tsara ary fakan-tsary mifanaraka aminy. Antony ampy ahafahantsika mandray an-tanana ity fitaovana ity. Indrindra rehefa miresaka momba ny inona isika afaka mividy ianao ny vidiny izay ambanin'ny 200 Euros.
Fotoana izao hahitana izay rehetra omen'ny View 5 Plus antsika ao anaty boaty. Voalohany indrindra mahita ny azy isika laharan-telefaona. Mahatsiaro ho voafatotra amin'ny fikasihana izy ary tsikaritra avy hatrany ihany koa ny haben'ny efijery.
Tsy ampoizina, toy ny mahazatra, na dia manana zavatra iray izay "noroahina" mpanamboatra hafa aza isika, taona maro lasa izay auriculares. Manana ny loader «Rindrina», ny famandrihana / tariby data miaraka amina endrika USB Type C. Wiko dia efa nanolo-tena tanteraka tamin'ity endrika ity amin'ny fitaovana vaovao rehetra.
Ary tsy misy zavatra hafa azontsika asongadina, ny antontan-taratasy fiantohana ny vokatra, ny dokam-barotra sasany ary ny kely Torolàlana fanombohana haingana. Amin'ity tranga ity dia tsy hitantsika koa ny tranga silicone mahazatra. Zavatra tsy hita satria mety tsy ho mora ny mahita kojakoja ho an'ity karazana terminal ity.
Tsy maninona ny famolavolana
Efa namaky matetika isika fa ny famolavolana fitaovana iray dia faharoa rehefa afaka manolotra fiasa lehibe. Wiko, toy ireo mpanamboatra maro hafa, dia tsy mizara an'io teôria io ary dia mihevitra ny fizarana famolavolana finday vaovao. Hitanay ny fomba Wiko Hizaha 5 na ny View 5 Plus dia manana famolavolana tena nianarana mba hiavaka amin'ny hafa.
Eo alohan'ilay Wiko View 5 Plus no ahitantsika a efijery mahatratra diagonal 6.55 santimetatra. Sarimihetsika goavambe IPS LCD multi-mikasika namboarina tamin'ny vera boribory 2.5D miaraka amin'ny endrika 20: 9. Manasongadina ny vahaolana amin'ny notch misy lavaka ao amin'ny efijery boribory mba hanafina ny fakantsary eo aloha.
Ny fisongadinan'ity View 5 Plus ity dia tsy isalasalana fa nalain'ny lamosiny. Manomboka amin'ny fitaovana nananganana azy sy ny endrika arosony. Amin'ny fifanarahana a vokany fitaratra manintona amin'ny endriny fitaratra manjelanjelatra. Ilay antsoina hoe vokatry ny gradient aingam-panahy, hoy ny mpamokatra, amin'ny fahagagana amin'ny lokon'ny natiora. Ny terminal efa nahazo dia loko "Aurora Blue”Ary nahita kinova loko ihany koa izahay "Silver Islandy".
Ny ao aoriana koa misy iray amin'ireo singa manan-danja indrindra an'ny Wiko View 5 Plus, ny fakantsariny. Ao amin'ny ankavia havia dia manaitra sary fakan-tsary miaraka amina lantira efatra miampy flash Flash. Modely malina ary koa kanto izay misy fonosana 4 izay holazainay aminao amin'ny antsipiriany bebe kokoa avy eo.
Araraoty ny tolotra omen'ny Wiko View 5 Plusamin'ny Amazon
Eto koa isika dia mahita singa iray manan-danja amin'ny filaminana, ny mpamaky ny rantsantanana. Any amin'ny faritra afovoany no misy azy ary mifangaro miavaka amin'ny fitaovana misy fitaovana sy loko mitovy. Any an-tampony ihany no ahitantsika ny Seranana fifandraisana jack 3.5. Eo amin'ny farany ambany dia manana ny mikrô, ny mampifandray mpampitohy miaraka amin'ny endrika USB Type-C, ary ny hany mpandahateny
Mijery ny lafiny ankavia ny slot miaraka amin'ny lovia ho an'ny karatra fahatsiarovana SIM sy Micro SD. Ary ao amin'ny Ankavanana dia ny bokotra ara-batana. Buttons hifehy boky, bokotra azo ovaina hampidirana fiasa mivantana, ary ny hidin-trano sy eo am-pamonoana.
Ny efijery an'ny Wiko View 5 Plus
Tsy azo ihodivirana ny fanohizana fampitahana Jereo ny 5 Plus miaraka amin'ny "normal" View 5. Ary ny efijery dia manohy manisa ny iray amin'ireo ampahany manan-danja indrindra rehefa mieritreritra ny hividy iray na finday hafa. Amin'ity tranga ity dia samy mizara ny efijery mitovy ary noho izany dia mitovy ny toetra mampiavaka azy.
Nahita iray izahay efijery malala-tanana amin'ny fanatrarana habe 6,55 santimetatra. Ny efijery goavambe iray izay misaotra ny fampidirana tonga lafatra dia miantoka fa tsy miavaka amin'ny habeny ilay fitaovana. Na dia tsy maintsy miaiky izany isika na dia vitsy aza zana-kazo kely indrindra, mivadika kely lava kokoa noho ny ankamaroan'ny.
La efijery dia karazany 20: 9 lafiny tahan'ny IPS LCD izay mahatonga ny Wiko View 5 fitaovana tonga lafatra hankafizany atiny multimedia. Ny haavon'ny famahana, priori, dia tsy iray amin'ireo tanjany ary nanana 720 x 1600 px misy HD +, fa ny traikefan'ny mpampiasa dia tsara kokoa noho ny nandrasana. Manana a 268 ppi hakitroka ary a famirapiratana tonga any amin'ny 450 nitsena.
Efa noresahintsika tamin'ny famerenana ny View 5, ny vahaolana ampiasaina hanafenana ny fakantsary eo aloha tianay. Ny lavaka ao amin'ny efijery dia manakana antsika tsy hahamarika ireo "sakana" amin'ny tontonana eo anoloana rehetra. Soa ihany, lavitra ny fijaliana ratsy tarehy, hitantsika ny fivoarany koa amin'ny fomba fampidirana ny fakantsary anoloana.
Fitaovana anatiny an'ny Wiko View 5 Plus
Manohy mamakafaka ny View 5 Plus izahay, ary mila mijery ao anatiny mba hahitana hoe inona no ampiasana azy hahalalana hoe afaka manome inona izany izy. Hitantsika indray ny processeur novokarin'i MediaTek. Amin'ity tranga ity, ny View 5 Plus dia mandeha lavitra kokoa noho ny View 5, ary miloka amin'ny chip matanjaka kokoa toa ny Helio P35 MT6765.
Ny Helio P35 dia afaka manana fahatokisan'i Samsung ho an'ny Galaxy A12 sy A21 vaovao. Ary koa sonia toy ny Xiaomi, Oppo, Motorola, LG na Huawei dia nampiasa ity mpikirakira ity ho an'ny maodely farany farany indrindra. Solvency sy fluidity hijanona ho an'ny fitaovana mandeha tsy misy dikany amin'ny asa tiantsika hatao.
Ny CPU dia misy a Octa Core miaraka amin'ny 4 Cortex A53 2.3 GHz cores miampy 4 Cortex A53 1.8 GHz cores miaraka amina maritrano 64 Bit. ny GPU Eny dia mitovy amin'ny View 5 izy io fa vitaminina bebe kokoa no azo tsaroany RAM 4GB ary a fahatsiarovana anatiny ny 128 GB izay azo hitarina amin'ny alàlan'ny karatra Micro SD. Raha mila smartphone mahery vaika amin'ny vidiny lafo ianao, mahazoa Wiko View 5 Plus izao amin'ny Amazon amin'ny fihenam-bidy.
Fizarana sary ao amin'ny Wiko View 5 Plus
Ity dia fizarana iray amin'ny fivoarana miandalana saika hatramin'ny voalohany, ary hitantsika ny fomba manatsara azy amin'ny fitaovana vaovao tsirairay. Amin'ity tranga ity, ary manaraka kely amin'ny fampitahana ny View 5 sy ny View 5 Plus, dia hitantsika ny fomba nisafidianana ny modely fakantsary mitovy. Ary mizara mitovy ihany koa izy ireo lens efatra sy ny flash LED.
Noho izany dia hitantsika ny fizarana fakana sary iray izay amin'ny ambaratonga tsara. Wiko dia manohy mivoatra ary manandrana manatsara amin'ny fitaovana tsirairay. Porofon'izany ny fakan-tsariny, iray amin'ireo tanjaky ny View 5 Plus. Ireo lantiany 4 dia mahatonga ny traikefa an-tsary ho tena mahafa-po.
Ny Wiko View 5 dia miaraka amin'ireto masinina ireto:
Sensor ho an'ny maodely fakana sary misy vahaolana 2MP.
family zoro mivelatra misy valiny 8MP.
family makro misy vahaolana 5MP.
Sensor CMOS fenitra miaraka amin'ny famaha 48MP, pixel habe 0,8.
Hitanay koa eo alohan a fakan-tsary eo anoloana misy vahaolana 8 Mpx. Saripika kalitao sy antso an-tsary. Tianay ny fomba isafidian'i Wiko hampifangaro ny fakantsary anoloana miaraka amin'ny notch miendrika lavaka eo amin'ny efijery.
Raha mijery ny fampiharana sary azy manokana, azontsika atao ny manasongadina ireo fomba fakana sary samihafa. Manana ny malaza izahay effects, antsoina hoe "artistic blur" izay manome valiny tsara. Na dia tsy maintsy milaza an'izany aza isika miaraka amin'ny jiro artifisialy dia mijaly be mba hamaritana ny tena zava-dehibe ary ny blur dia miafara amin'ny tsy fahatomombanana.
Miankina amin'ny tsaina mandroso foana io rehefa mampiasa fakan-tsary satria manao fanitsiana mandeha ho azy sy fanitsiana izay manatsara ny sary sy horonan-tsary. Fa indraindray ity miharihary fa mampiadana ny fikarakarana ny sary.
Sary nalaina niaraka tamin'ny Wiko View 5 Plus
Toy ny mahazatra, apetrakao amin'ny fisedrana ny fakantsary fakan-tsary am-pivoahana mivoaka haka sary. Izahay dia efa afaka nizaha ity modely fakantsary ity tao amin'ny Wiko View 5 izay izaran'izy ireo singa hafa. Amin'izao fotoana izao dia milaza izahay fa eo alohan'ny fakantsary tsara. Ny fampitahana dia maharikoriko foana, fa raha jerena dia eo antenatenany isika, ny sary azo dia azo ekena tokoa.
Eto isika dia mahita sary miaraka amin'i a hazavana voajanahary tena tsara. Toy ny 100% an'ny sensor, manolotra foana izy ireo ny endriny tsara indrindra amin'ny toe-java-jiro voajanahary tsara ivelany. Ity misy santionany amin'izany. Loko matevina sy voafaritra tsara, vahaolana tsara sy halalin'ny zava-misy.
Eto izahay dia manandrana manamarina ny toetran'ny sensor firafitra sy loko hafa izay mitovy endrika sy mifanohitra tsara. Araka ny hitantsika, ireo fahasamihafana dia ankasitrahana mora foana ary el haavon'ny pitsopitsony dia tena tsara.
Amin'ity sary ity, hitsapana ny zoom avy amin'ny fakantsary Wiko View 5 Plus dia hitantsika ny fisehon'ny sary voalohany. Indray mandeha indray, a fifandanjana ny loko sy ny jiro tratra tsara.
Ary eto miaraka amin'ny zoom to maximum, voamariky ny very ny kalitao ary tsikaritra izy ireo, toa ny lojika, ireo teboka tena tsikaritra ary tabataba be no miseho. Na eo aza izany, dia afaka mamantatra tsara ny endrik'ireo zavatra isika.
Ary farany, amin'ity fisamborana ity dia hitantsika ihany koa ny fomba ny loko dia tena marina amin'ny zava-misy araka izay azo atao. Teknolojia, endrika, tonony ary halaliny izay voafaritra tsara.
AUTONOMY (amin'ny sora-baventy)
Efa naneho hevitra izahay fa ny fizarana fakan-tsary dia zava-dehibe amin'ity fitaovana ity amin'ny zavatra rehetra azony omena antsika. SAINGY Battery an'ny Wiko View 5 Plus, ary ambonin'izany rehetra izany ny fizakan-tena izay afaka mandray anjara aminay, mendrika homarihina manokana. Nahita a Fiampangana bateria 5.000 mAh, isa avo kokoa noho ny ankamaroan'ny fitaovana.
Fa raha mijery ny faharetan'ity enta-mavesatra ity isika, raha ny filazan'ny mpanamboatra antsika, dia mety hiatrika izany isika iray amin'ireo finday avo lenta manana ny fahaleovan-tena tsara indrindra ny tsena eo amin'ny faritra misy azy. Tsy mila miampatra ny baterian'ny View 5 Plus indroa fotsiny isika mandritra ny herinandro. Miaraka amin'ny fampiasana "finday" mahazatra an'ny finday avo lenta ny fizakantenan'izy ireo dia mahatratra hatramin'ny telo andro sy tapany tsy mampino miaraka amin'ny entana 100%. Hanadino ny toerana nitahirizanao ny charger ianao ...
Ny foto-kevitry ny fampiasana finday mahazatra dia ny resabe hatrany no resahina. Ny mpampiasa tsirairay dia mampiasa ny findainy tena manokana sy samy hafa. Na izany aza, azontsika atao ny milaza izany na dia amin'ny fampiasana mahery vaika aza ny mitovy, ny fizakantenany dia lasa tsy nisy olana mihoatra ny roa andro feno.
Ny lafy ratsy azontsika apetraka amin'ny bateria dia izy io tsy manana teknolojia famahanana haingana. tsy afaka mitondra ny View 5 Plus isika tsy misy na iray aza ny fenitra fiampangana tsy misy tariby. Mba ho rariny dia ilaina koa ny manamarika fa ny Wiko View 5 Plus tsy mandeha izy, Tsia mihitsy, finday matevina, na ny mifanohitra amin'izay aza. Ianao ve mitady finday manana fahaleovan-tena tsara? Efa manana ny Wiko View 5 Plus amin'ny Amazon miaraka amin'ny fihenam-bidy sy fandefasana maimaim-poana.
Antsipirihany, fanampiny sy ny tsy fisian
Ny fiarovana dia lafiny iray tokony hodinihina ao amin'ny Android miaraka amin'ny fitaovanao rehetra. Noho io antony io, farafaharatsiny azontsika atao ny manakana ny fitaovantsika amin'ny alàlan'ny kaody isa na lamina mamoha. Ankoatr'izay, miankina amin'ny mpanamboatra azy ireo dia mihabe ireo fahafaha-manao ireo.
Ny View 5 Plus dia mampihatra fepetra fiarovana amin'ny fomba roa samy hafa sy mahomby. Araka ny hitantsika tamin'ny famaritana ireo ampahany amin'ny lafiny ara-batana amin'ny finday, ao aoriana no mpamaky ny dian-tànana. Any afovoany no misy azy ary manolotra a mamoha mahomby sy tena haingana. Ankoatr'izay, misintona rindrambaiko, ary manararaotra ny fakantsary anoloana, azontsika atao ny mampihetsika ny famohana amin'ny alàlan'ny fanekena ny tarehy.
Ho an'ny tsy teo Araka ny azontsika amaritana, ny voalohany tonga ao an-tsaina dia mifandray amin'ny fifandraisana. Ary tsia, ny Wiko View 5 Plus tsy manana teknolojia 5G. Ny zavatra izay raha mijery ny elanelam-bidiny misy azy ianao dia tsy adala. Ho an'ny ambiny, rehefa nifandray izahay, malahelo ny famandrihana haingana izahay y na dia amin'ny lafiny kely kokoa aza, ny fametrahana tsy manara-penitra.
Latabatra famaritana Wiko View 5 Plus
modely Hijery ny 5 Plus
efijery 6.55 HD + IPS LCD
Sarimihetsika 20: 9
Famaritana ny sary 720 X 1600 px - HD +
Hakitroky ny efijery 268 ppp
Fahatsiarovana azo tsapain-tanana Micro SD
Unité centrale Octa-Core 2.3 GHz
Fakan-tsary Rear quad sensor 48 + 2 +8 + 5 Mpx
Fakan-tsary Selfie 8 Mpx
Solomaso makro 5 Mpx
Zoomika optika NO
Zoom nomerika SI
Fiampangana haingana NO
Fiampangana tsy misy tariby NO
lanja 201 h
lafiny 76.8 X 166.0 X 9.3
vidiny 187.00 €
Rohy mividy Wiko View 5 Plus
Tonga ny fotoana hilazana aminao ny zavatra tianay indrindra an'ny Wiko View 5 Plus, ary hijerena ireo lafin-javatra izay manana toerana fanatsarana. Fa zava-dehibe ny hitadidiana fa miatrika finday mijanona ambanin'ny 200 euro isika mba hahafahantsika mazava momba ny lesoka sy ny fitakiana izay mety hananantsika.
La fizakan ny bateria izay manome hatramin'ny 3,5 andro ny faharetany amin'ny sarany tokana dia tratry ny vitsy ihany izy io.
Goavana efijery Tolotra 6,55-inch fanandramana hita maso ho an'ny tsara kokoa na dia tsy manana ny vahaolana "ambony" aza.
La sary Tonga amin'ny fanitsakitsahana an'ity Wiko ity ary mampiseho fa mivoatra ity mpanamboatra ity mba hanomezana vokatra miha-matotra.
La fifandraisana mandefa aloka amin'ny fitaovana tena manintona amin'ny lafiny rehetra fa tsy manana 5G.
Tsy nahita koa izahay fametrahana tsy manara-penitra ni entana fifadian-kanina. Tsy maintsy milamina amin'ny enta-mavesatra "ara-dalàna" isika ary manana faharetana kely.
Navoaka tamin'ny: 29 Aprily 2021
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » WIKO VIEW 5 Plus: Fanadihadiana, famaritana ary vidiny
Ny lalao fisainana 6 tsara indrindra ho an'ny Android